Wararka - Baararka isku -dhafan ee kaabayaasha mustaqbalka | Dunida Composites
GFRP waxay tirtiraysaa halista daxalka waxayna kordhisaa cimri dhererka shubka la xoojiyay afar jeer si loo daboolo baahiyaha mustaqbalka sida taraafikada, magaalaynta iyo cimilada ba'an. #sidemanufacturing #frprebar #Kaabayaasha
Mashruuca dib -u -dhiska ugu weyn ee GFRP. Qiyaastii 11,000 kiiloomitir ee GFRP waxay xoojisay kanaalka xakamaynta daadadka ee Jizan, Sacuudi Carabiya, waxayna gaadhay cimri 100 sano ah. Isha sawirka dhammaan sawirrada: Mateenbar
Caalamka, dhismayaal la taaban karo ayaa loo weeraray si aan hore loo arag. Kaliya ma aha socodka waddooyinka, buundooyinka iyo jid -gooyooyinka oo kordhay, laakiin isbeddelka cimilada ayaa sidoo kale sii xumeeyay dhacdooyinka cimilada aadka u daran, oo ay ku jiraan duufaanno rabshado wata iyo roobab culus, oo horseeday fatahaado iyo dhacdooyin kale oo burburin ah. Walaacaas oo kale, shubka ayaa dillaaci kara. Markaad la kulanto waxyaabo ay ka mid yihiin biyo cusbo leh oo u nugul baararka birta ah, tani waxay si dhakhso ah ugu sii xumaan kartaa meelaha daxalka leh.
“Dil -dillaacyadu waxay abuuraan hab loogu talagalay sababaha deegaanka ee gardarrada leh si ay u gaaraan birta iyo/ama birta hore oo ay bilaabaan geeddi -socodka oksaydhka daxalka,” ayay sharraxday Waaxda Gaadiidka ee Florida (FDOT, Tallahassee, Florida, USA) Websaytka Hal -abuurka Dhismaha. "Habka hal -abuurka leh ee lagu xallin karo dhibaatadan ugu weyni waa in lagu beddelo xoojinta bir -dhaqameedka iyo birta birta oo lagu xoojiyo polymer -ga la xoojiyay (FRP)." FDOT wuxuu hormuud u ahaa adeegsiga iyo tijaabinta baararka birta ee FRP iyo horumarinta naqshadeynta iyo heerarka adeegsiga, sida Heerarka ay soo saartay Machadka La -taaban karo ee Mareykanka (ACI ee Farmington Hills, Michigan, USA). In kasta oo baararka birta ah ee isku dhafan badiyaa laga sameeyay fiber galaas (GFRP ama GRP), alaabooyinka isticmaalaya basalt (BFRP) ama fiber carbon (CFRP) ayaa sidoo kale la sameeyay.
Nick Crofts, oo ah maamulaha GFRP soo saaraha rebar Mateenbar (Dubai, UAE iyo Concord, North Carolina, USA) ayaa yiri: “Sababtoo ah taariikhda dheer iyo qaaliga ah ee daxalka, ee deegaannada gardarada ah, Birta mar dambe looma arko inay tahay ikhtiyaar wax ku ool ah. Bixiyaha ugu weyn adduunka ee mashaariicda dib -u -dhiska GFRP. Mashruucan ayaa ku yaal magaalada Jazan ee dalka Sacuudi Carabiya, dhererkiisuna waa 23 kiiloomitir iyo ballac ah 80 mitir. Waa kanaalka xakamaynta daadadka. Crofts wuxuu yiri, in kasta oo dib-u-soo-celinta GFRP ay tahay 30-40 sano jir, laakiin mashaariicda muhiimka ah sida Kanaalka Daadka Jizan ayaa ku riixaya kaabayaasha guud. Koritaankan ayaa sabab u noqday dhirta cusub ee Mateenbar ee Sucuudiga iyo Maraykanka
Dib -u -hagaajinta Mateenbar GFRP waxaa soo saaray Pultron Composites (Gisborne, New Zealand). Isku -dhafka Pultron waa hormuudka iyo khabiir ku ah tiknoolajiyadda taranka iyo hal -abuurka alaabta. Mateenbar wuxuu ka jawaabayaa caqabadaha gaarka ah ee suuqa dib -u -dejinta, oo aan u baahnayn oo keliya wax -soo -saar sare iyo qiimayaal hooseeya, laakiin wuxuu kaloo u baahan yahay in alaabooyinka ay cayimaan naqshadeeyayaasha mashruuca iyo/ama injineerada. Sidaa darteed, Mateenbar waxay aasaastay warshaddeedii ugu horreysay 2008, oo u dhow macaamiisha suurtagalka ah iyo shirkadaha injineernimada mashruuca ee Dubai, Imaaraadka Carabta, aag loo yaqaan mashaariicda kaabayaasha ballaaran iyo adeegsiga hormuudka ah ee agabyada isku-dhafan. Pultron ayaa weli ah lammaane istiraatiiji u ah Mateenbar iyo qeybiyaha ugu weyn ee tikniyoolajiyadda la habeeyay iyo horumarinta wax soo saarka.
Tallaabada 1 Fiber dhalada ah ayaa lagu quudiyaa caaryada cawska, waxaana la isku duraa xabagta inta lagu guda jiro hawsha xidhitaanka caaryada.
Tallaabada labaad, geeddi -socodka caleemo -saarku wuxuu soo saari karaa ulaha isku -dhafan ee dhalada galaas/vinyl ester ilaa 80 fuudh.
Warshadda Mattenbar waxay adeegsataa tikniyoolajiyadda horumarsan ee Pultron si ay u soo saarto baararka birta ee aadka loo jaangooyay ee soosaarka sare leh iyada oo aan la soo saarin xeryahooda dabiiciga ah ee kacsan (VOC). "Waxaan cusbo ku durineynaa caaryada biraha injineernimada oo aan daaweynnaa," ayuu yiri Crofts.
Wuxuu raaciyay: “Rebarku waa badeecad injineer leh oo leh qaab cabbir ka wanaagsan ± 1%.” “Wax cudurdaar ah looma hayo in la arko xabagta dhulka taal ama boodhka hawada ku jira. Fiber -ka la isticmaalay waa Owens Corning (Ohio, USA). Toledo) dhalada ECR ee daxalka u adkaysata, cusbiyuhu waa kala duwanaansho u gaar ah vinyl ester koolo epoxy. Waxay sare u qaadeysaa adkaysiga, xoogga iyo cimri dhererka, waxayna aad uga fiican tahay tan leh sumadda epoxy Polyester lafdhabarta dhamaadka. ”
Ulaha wareegga badan leh ayaa markaa loo farsameeyaa si ay u sameeyaan astaanta muquuninta si shamiitadu u xambaarto culeyska. "Tani sidoo kale waa hawlgal xiran," ayuu Crofts tilmaamay. “Isticmaal dukaan makiinado oo lagu rakibay nidaamka sifeynta hawada Donaldson (Bloomington, Minnesota, USA). Kadib, waxaan ku daboolannaa bannaanka filim rooti ah si aan u hagaajino maaraynta. ” Mateenbar's Dhererka baarka birtu wuxuu noqon karaa ilaa 80 fuudh, waxaana loo jari karaa dherer go'an sidii loo baahdo. "Inta badan kaabayaasha iyo mashaariicda dhismaha, sida caadiga ah waxaad aragtaa 40 fuudh," ayuu yiri Crofts.
“Dhex-dhexaadka birta tooska ah ee dhexdhexaadka ah waa 0.75 inji, iyo moodalka giraanta oo laga sameeyay 11,600-ksi (80-GPa) fiber galaas waa 8,700 ksi (60 GPa); sidaa darteed, waxa ku jira fiber-ka ayaa aad u sarreeya-in ka badan 80% (miisaan ahaan). Ma jirto si loo leexiyo, sidaa darteed baararka birta ah ee GFRP ee la qaloociyey waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo habab kala duwan iyo dhalooyin iyo adeegsiga tikniyoolajiyadda lahaanshaha. ”
Jizan (oo sidoo kale loo yaqaan Jazan) waa caasimadda gobolka Jizan. Waxay ku taal geeska koonfur -galbeed ee Sacuudi Carabiya, waqooyiga xadka Yemen. Sababtoo ah daadad ka yimid buuraha u dhow, daadad masiibo ah ayaa dhici kara inta lagu jiro roobab xoog leh Buundadan biyo-shubka ah oo la xoojiyay oo dhererkeedu yahay 23-kiilomitir ayaa loo dhisay si loo ilaaliyo aag warshadeed oo weyn, oo ay ku jirto warshadda sifeynta shidaalka ee Saudi Aramco (Tehran, Saudi Arabia).
Kahor masiibada COVID-19, Saudi Aramco wuxuu ahaa shirkadda ugu weyn adduunka xagga dakhliga. Waxay gacanta ku haysaa dhammaan ganacsiyada batroolka iyo derisyada ee Boqortooyada waxayna sidoo kale ka dhigan tahay 10% dhammaan dhismayaasha ka socda Sacuudi Carabiya. "Saudi Aramco waxay ogaatay in qayb weyn oo ka mid ah miisaaniyad sanadeedka ay ku baxdo beddelidda dhismayaasha la taaban karo," ayuu yiri Crofts. “Milixda sare ee ciidda ee aagga iyo heerkulka sare ee delta maalin ilaa habeen ayaa sababay in shubka si dhakhso ah u dillaaco. Saudi Aramco wuxuu bilaabay inuu raadiyo farsamooyin kale. Xubin ahaan ACI, waxay qaateen istiraatiijiyad u gaar ah oo ka timid halbeegga birta ee FRP ee ay dejiyeen oo qaateen. Iyada oo halbeeg u ah Aramco -ka Sucuudiga, hagaajin iyo hagaajin dheeraad ah ayaa la sameeyey. Kadibna, shirkaddu waxay u baahday adeegsiga baararka birta ee GFRP meelaha qaarkood ee aadka u burbursan. ”
Saudi Aramco (Saudi Aramco) ayaa dalbatay mashruuca Kanaalka Daadka Jizan kadibna waxay dooratay saddex alaab -qeybiye oo GFRP ah. Mateenbar wuxuu ku guuleystay 50% qandaraaska. "Marxaladda diyaarinta mashruuca, waxaan sugnay dhowr bilood," ayuu Crofts soo xusuustay. “Kadib, si lama filaan ah, dhammaan agabkii ayaa isla markiiba loo baahday. Warshadda Dubai ayaa muddo toddobaad gudaheed ah dhulka lala simay, waxaana lagu soo saaray toddoba bilood gudahood. Ku dhawaad ​​6,000 kiiloomitir oo GFRP rebar. ”
Tallaabada 5 U dhig baararka birta sida waafaqsan sawirrada naqshadeynta, oo isticmaal qaybaha tuubooyinka wareegsan si aad ugu taageerto joogga ku habboon, oo aad si wadajir ah ugu hagaajisid xargaha birta ah.
Bixinta ka dib, baararka birta ah waxaa rakibay qandaraaslaha mashruuca Al Yamama Group (Dammam, Saudi Arabia). "Waxaan u maleyneynaa inaan u baahanahay inaan bixinno kaalmo badan inta lagu jiro habka rakibidda, laakiin muhiim maahan," ayuu yiri Crofts. "Waxay ogaadeen in rakibidda ay aad uga dhakhso badan tahay xoojinta birta." Dib -u -celinta GRFP ayaa culeyskeedu yahay 25% oo kaliya birta birta, sidaa darteed waxay qaadi kartaa dherer dhaadheer oo leh dad yar waxayna u sahlan tahay dhaqaajinta iyo meelaynta. Wuxuu raaciyay: "Waxaa sidoo kale jira baahi loo qabo dhuumaha meelaynta oo yar." "Qaybahan tuubooyinka wareegsan waxaa loo isticmaalaa in lagu taageero birta dhererka saxda ah ee shubka."
Ka dib markaad dhigto birta birta ah, ku xir silig birta ka samaysan oo fiiri, ka dibna isku diyaari inaad shubka shubka ku shubto. Crofts ayaa tilmaamay in kooxda rakibidda dib-u-dejinta ay si dhaqso leh u dhaqaaqeen oo dhab ahaantii ay hal kilomitir ka hooseeyeen kanaalka 40-80-mitir ka hor inta aysan ogaanin in hawlgalka shubka shubka ah uusan sii socon karin. "Markaa way istaageen oo u oggolaadeen in shubka uu qabsado," ayuu raaciyay. “Tani waa muhiim maxaa yeelay haddii roobab xoog leh ay da’aan, daadku wuxuu ka buuxin doonaa webiga ciid. Tani waxay dhacday laba jeer, taasoo dhalisay dib -u -dhac, laakiin waxay sidoo kale iftiiminaysaa muhiimada ay leedahay kanaalka biya -mareenka. ”
Ka dib markii lagu shubay shubka dusha sare ee biraha birta ah, kooxda rakibidda ayaa is -uruurin doona oo cadaadin doona si ay meesha uga saaraan goobooyin hawo, ka dibna waxay xoojiyaan maalmaha iyo toddobaadyada soo socda. Tallaabooyinkan, ma jiro farqi u dhexeeya GFRP iyo rebar, ”ayuu yiri Crofts. "Waxaan dhammaystirnay bixinta rebar bishii Janaayo 2020, kanaalkana waa la dhammaystiray."
Jidka wabiga shubka ee la xoojiyay oo lagu dhammeeyay Jizan wuxuu biyaha daadadka ka fogeynayaa waddooyinka iyo tas -hiilaadka wax -soo -saarka warshadaha. Isha Sawirka: Kooxda Al Yamama
Crofts ayaa tilmaamay in GFRP rebar uusan ahayn bedelka tooska ah ee birta. “GFRP rebar iyo birta birta ayaa leh astaamo kala duwan. Kala duwanaanshahan waa in lagu daraa naqshada. Sidaa darteed, inkasta oo ACI 318 birta naqshadaynta birta la xoojiyay inta badan la isticmaalo, tani ma khusayso GFRP rebar, oo ku tiirsan tilmaamaha Naqshadda ACI 440. Tusaale ahaan, GFRP rebar wuxuu ka xoog roon yahay birta laakiin modulus cillad hoose. Waxa kale oo ay laastikada u tahay meesha guuldarada. ” Crofts ayaa tilmaamay in naqshadaynta dhismayaasha birta, tirada rebars sida caadiga ah lagu go'aamiyo xoogga gilgilka. Si kastaba ha noqotee, GFRP -ka, modulus -ka ayaa inta badan ah qodobka go'aaminaya xaddiga xoojinta loo baahan yahay. Buuxinta shuruuddan ayaa badanaa keenta in dhismuhu dhaafo shardiga xoogga ugu dambeeya. Waxa kale oo ay hubin kartaa in qaabka guuldarrada ugu habboon uu ka muuqdo qaab -dhismeedka dib -u -hagaajinta GFRP.
Tixgelin kale ayaa ah abuuritaanka foorarsiga iyo qaabka. Crofts ayaa tilmaamay in saamiga baararka birta qaloocsan iyo baararka birta tooska ah ee mashruuca celcelis ahaan 30%. Isticmaalka baararka birta, waxsoosaarkan waxaa badanaa lagu sameeyaa goobta. Wuxuu sharraxay: "Bar -jiifka waxaa lagu soo saaraa warshaddeena bay'ada gacanta ku haysa waxaana si toos ah loogu geyn karaa goobta iyada oo aan la qaadin tallaabooyin wax -soo -saar oo dhexdhexaad ah." “Marka laga eego dhinaca sahayda, tani waxay noqon kartaa caqabad maxaa yeelay dalabku waa toddobaad gudihiis. Waxaan ogaanay in dabacsanaanta iyo in warshado laga helo isla aagga ay aad muhiim u yihiin. ”
Crofts wuxuu yiri: “Haddii lagu xisaabiyo doollar halkii pound, qiimaha dib-u-dhiska GFRP waa 3-4 jeer birta, maxaa yeelay cufnaanta badeecadeena waa rubuc taas. Halbeegga ku habboon ee cabbiradu waa doolar halkii cag, maxaa yeelay dhab ahaantii waa la cayimay oo waa la iibsaday Rebarku waa qayb yar oo ka mid ah mugga shubka. Markaad cabbirto qiimaheeda mugga, GFRP rebar wuxuu la tartamayaa birta. ”
"Jizan waa mashruucii ugu horreeyay ee ballaaran oo aan oggolayn isticmaalka birta," ayuu yiri Crofts. “Waxay leeyihiin koox naqshadeysa qaab dhismeedka loo baahan yahay oo leh adeeg nololeed in ka badan 100 sano. Markii dalabku sii kordhayo, dhowr soo -saareyaasha dib -u -dhiska GFRP ayaa raadinaya saldhigyo wax -soo -saar oo ku yaal Sacuudi Carabiya. ” Mateenbar ayaa sidoo kale halkaas ka dhisaysa warshad cusub, Warshada cusub ee Concord, North Carolina, USA, waxay u adeegtaa Waqooyiga Ameerika, oo ah suuqa labaad ee ugu weyn Bariga Dhexe kadib. Labada warshadood ee cusubba waxay qaataan teknolojiyadda taranka sare ee Pultron, oo daboolaysa aag dhan 100,000 mitir murabac, waana dhir casri ah. Labada qalabba waxaa la dhiibi doonaa Oktoobar 2020, wax soo saarkana waxaa la filayaa inuu bilowdo horraanta 2021.
Maaddaama baahida loo qabo dib -u -soo -celinta GFRP ee Bariga Dhexe ay sii kordheyso, suuqa Waqooyiga Ameerika ayaa sii koraya. Croft wuxuu yiri: "Waqtigan xaadirka ah, dalabka ugu weyn ee GFRP rebar ee Waqooyiga Ameerika waa xeebaha ama buundooyinka cusbada leh ee xeebaha iyo buundooyinka." “Si kastaba ha ahaatee, DOT iyo milkiilayaasha hantida ayaa hadda raadinaya inay kordhiyaan kharashaadka inta lagu jiro meertada nololeed ee qaab-dhismeedka [CW ayaa oggolaatay, Eeg“ Doorka sii kordhaya ee agabka isku-dhafan ee kaabayaasha ”], oo ay ku jirto yareynta baahida dayactirka iyo sameynta muddada fog iyo kaabayaal waara. Injineerada la -talinta iyo adeegsadayaasha ugu dambeeya waxay arkaan qiimaha tikniyoolajiyadda dib -u -dejinta GFRP, iyo soo -saareyaasha dib -u -soo -saarka GFRP waxay iska kaashanayaan heerarka tayada iyo waxqabadka. Waxa kale oo jira qaar ka mid ah adeegsadayaasha hormoodka ah, sida FDOT, kuwaas oo dhiirrigelinaya farsamada oo caawiya DOT -yada kale, kuwaas oo gacan ka gaystay fidinta aqoonta. ”
Crofts ayaa tilmaamay in FDOT ay dhowaan marti gelisay webinar ku saabsan naqshadaynta la taaban karo ee GFRP oo ay ka qaybgalayaashu 200. Webinar kale, Dr. Antonio Nanni, oo ka mid ah cilmi -baareyaasha ugu waaweyn ee Jaamacadda Miami (Miami, Florida, USA) ayaa yiri: “FRP rebar waa diyaar.” Crofts ayaa sheegay in tan la gaaray. caddayn. "Shaqadu hadda waa inay u oggolaato shirkado badan inay cayimaan oo u oggolaadaan qandaraasleyda inay adeegsadaan."
Qaab -dhismeedka ay soo saartay habka wax -ka -qabashada cadaadiska joogtada ah ayaa 30% ka khafiifsan aluminium, qiimaha Airbus iyo Boeing waa mid sarreeya.
Badeecadaha kala duwan ee CIPP waxay awood u siinayaan dayactirka dhuumaha dhulka hoostiisa ee biyaha wasakhda ah iyo biyaha la cabo halkii laga qodi lahaa oo la beddeli lahaa.
Waxyaabaha isku dhafan ee Thermoplastic oo si baaxad leh loo soo saari karo waxay ku yeelan doonaan saamiyo cusub oo suuqa ah warshadaha hawada sare.
Waqtiga dhejinta: Jun-15-2021